နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Galaxy Note4VS Galaxy Note5| Androidsis
ယနေ့တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခုတင်ဆက်ရန်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် Samsung ၏ Galaxy Note ကို5နှင့်တင်ပြအခြားစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် Samsung Galaxy Edge Plus။ Terminal နှစ်ခုစလုံးကိုယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ သို့သော်ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ထုတ်ကုန်အသစ်များ၏ပုံသဏ္howာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကြည့်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ ယခုမျိုးဆက်တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်မြင်တွေ့ရပြီ။ စတုတ္ထမျိုးဆက်နှင့် Samsung Galaxy Note4ကိုပဉ္စမမျိုးဆက်သို့မဟုတ် Galaxy Note5နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်။ ကိရိယာအသစ်ကဘာတွေတိုးတက်လာစေသလဲ။ ? ဒီမျိုးဆက်ကိုပြောင်းလဲသင့်လား။
3 software နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်
4 ကင်မရာ၊ ဘက်ထရီနှင့်ပိုမိုသောအရာများ ...
5 နှိုင်းယှဉ်ရန်ဇယား Galaxy Note4VS Galaxy Note 5
El Galaxy Note ကို4၎င်းသည် ၁၅၃၃ မီလီမီတာ x ၇၈.၆ မီလီမီတာ x ၈.၅ မီလီမီတာ ရှိ၍ အလေးချိန် ၁၇၆ ဂရမ်ရှိပြီးကြီးမားသော terminal ကိုပြုလုပ်သည်။ သို့သော်အနက်ရောင်သတ္တုစပ်နှင့်ငွေအနည်းငယ်၊ ငွေရောင်နောက်ကျောနှင့်ချောမွေ့သော texture ရှိခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းစက်ကိုကြည့်။ မရပါ။ ကြီးတယ် သူ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် galaxy Note ကို5၎င်းတွင်၎င်း၏အစ်ကိုထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သည့်ဖန်သားကိုယ်ထည်ရှိပြီးသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ခန့်မှန်းအလေးချိန်မှာ ၁၇၁ ဂရမ်ရှိပြီးအရီရီယိုသည်၎င်း၏ယခင်ထက်ကိုင်ရန်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
Note4ကို screen တစ်ခုအောက်မှာတပ်ဆင်ထားပါတယ် 5,7 လက်မ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိပြီး QuadHD resolution ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 515 ppi ၀ န်းကျင်ကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် Galaxy Note5ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည် 518 ဖြစ်ပေမယ့် ၅.၇ လက်မကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့်တစ်လက်မကို pixel အရပြောရရင်၊
ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးတွင်နာမည်ကြီး S-Pen တံဆိပ်ပါရှိသည်။ ဒီ stylus က Galaxy Note ကိုအခြား Phablets တွေနဲ့မတူအောင်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် Samsung မှာအခြား Device များမှာမတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ Air Software ရှိလို့ပါပဲ။ Galaxy Note4တွင် Qualcomm မှထုတ်လုပ်သည့် Quad-Core ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည် Snapdragon 805 သို့မဟုတ် Exynos 5433 ကိရိယာစီးပွားဖြစ်ခဲ့ပြီးရှိရာဒေသပေါ်မူတည်သည်။ မှတ်စု5အသစ်တွင်ပါဝင်သည် Octa-Core Exynos ပရိုဆက်ဆာ 64-bit architecture နှင့်4GB RAM memory သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို Note4ထက်ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။
ကင်မရာ၊ ဘက်ထရီနှင့်ပိုမိုသောအရာများ ...
Note4ကို screen တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည် ၅ megapixels autofocus, LED flash နှင့်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း 2160p resolution ဖြင့် 30 fps ရှိနိုင်သည်။ Note5၏နောက်ဘက်ကင်မရာမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးဘဲ၊ Note4နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်ရှေ့ကင်မရာကို update လုပ်ထားပြီး Note 3,7 မှ4MP တွင်5MP ရှိခြင်းမှထွက်ခွာသွားသည်။
ဘက်ထရီအတွက်ကျနော်တို့ဘယ်လို၌တွေ့မြင် Note4သည် 3.220 mAh ဖြစ်ပြီးထုတ်ယူနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီပဉ္စမမျိုးဆက်အတွက်၎င်း၏ဘက်ထရီ ထုတ်ယူမရပါ ထို့အပြင်စွမ်းဆောင်ရည်လည်းနည်းပါးသည် 3.000 mAh ဘက်ထရီ။ Terminal နှစ်ခုစလုံးတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာသူတို့၏ internal storage ဖြစ်သည်။ Note4တွင် 32 GB နှင့် 64 GB ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ Note5တွင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘက်ထရီ၏သမိုင်းတွင်ကဲ့သို့၊ ပထမတွင်၎င်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး၊
နှိုင်းယှဉ်ရန်ဇယား Galaxy Note4VS Galaxy Note 5
ဤတွင်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံး၏နှိုင်းယှဉ်ဇယားဖြစ်သည်။ terminal တစ်ခုစီနှင့် ပတ်သတ်၍ ပိုမိုရှာဖွေရန် image ကိုသင်နှိပ်နိုင်သည်။
4.5 ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 4.5 ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
€699 € €700a€800
Galaxy S6 မှသတ်မှတ်ထားသည့်လိုင်းများအရ Note5သည်၎င်း၏ခမ်းနားထည်ဝါမှု၊ ယခုနှစ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Note4သည်ယခင်မော်ဒယ်အပြီးတွင်ပေါ်ပေါက်လာသော Samsung flagship အသစ်ဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Galaxy Note4VS Galaxy Note 5
microSD မပါ ၀ င်တဲ့အမှားကြီး ဒါကြောင့်ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
Galaxy S6 Edge VS Galaxy S6 Edge + နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း